मध्यबिन्दु अनलाइनसुशासनका पक्षमा हाम्रो ख़बरदारी | मुख्यमन्त्री राईको राजकिय रजगज,उनकी श्रीमतीको मर्यादाक्रम के ?
काठमाडौं – एक समय थियो, राजाहरुलाई मन लागेपछि जे पनि गर्न छुट हुन्थ्यो । समयक्रमसँगै राजा र राजतन्त्र ईतिहास बन्यो, देशमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र आयो । तर,राजकीय ठाँट र शैली झन बढेको छ । अहिले जनताका प्रतिनिधि भनिएकाहरु नयाँ रुपको राजा बनेर आएका छन् । उतिबेलाका राजा महाराजा र अहिलेका शासकका आचरण, व्यवहार र कार्यशैली उस्तै देखेपछि गणतन्त्रमा पनि राजाको झल्को आउने रहेछ ।
त्यसो त कोरोना महामारी बढिरहेका बेला मुख्यमन्त्री राईले कोभिड प्रोटोकल मिचेर विराटनगरमा होली विशेष कार्यक्रममा सहभागी भएपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो । ठूलाबडा, सत्ता र शक्तिमा हुँदा जे गरे पनि हुने भएपछि हिजोका राजा र आजका जनप्रतिनिधिबीच के फरक भयो र भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वभाविक हो र ? जनआस्था बाट ।